Ryanair wuxuu xoojiyaa waddada Budapest oo leh xiriir cusub oo Shannon ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ryanair wuxuu xoojiyaa waddada Budapest oo leh xiriir cusub oo Shannon ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • Irland News Breaking News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xiriirka laba-toddobaadlaha ah wuxuu bilaaban doonaa 1da Nofembar wuxuuna ula jeedaa in diyaaradda Irish ay ka shaqeyso 81% adeegyada Budapest ee Ireland.
Ryanair wuxuu xaqiijinayaa ballaarinta waddada Budapest.
Duulimaadka cusubi wuxuu bixiyaa mid muhiim u ah isku xirka albaabka Hungarian ee Ireland.
Adeegga cusub ayaa muhiim u noqon doona kor u qaadidda isku xirnaanta Budapest ee Ireland oo dhan.
Jiilaalkan Madaarka Budapest waxay kordhin doontaa shabakadeeda Irish Ryanair, maadaama sidaha qaaliga ah ee aadka u jaban uu xaqiijiyay xiriir cusub Shannon.
Xiriirka laba-toddobaadlaha ah wuxuu bilaaban doonaa 1da Nofembar wuxuuna ula jeedaa in diyaaradda Irish ay ka shaqeyso 81% adeegyada Budapest ee Ireland. Waxa kale oo ay siisaa ku -biirid muhiim u ah isku -xidhka albaabka Hangari ee Irland, iyada oo Shannon uu ku yaallo wadnaha dalxiiska Wild Atlantic Way ee xeebta galbeed ee dalka.
Balázs Bogáts, Madaxa Horumarinta Duulimaadyada, Madaarka Budapest ayaa faallo ka bixinaya: “Ryanair ballaarinta la xaqiijiyay ee khariidadda waddadayadu waxay si buuxda u taageeraysaa diiradeena hore-u-eegista ee ma aha oo kaliya inaan dib-u-dhisno shabakadeena, laakiin sidoo kale waxay sii horumarin doontaa dalxiiska iyo isku xirka ganacsiga si isku mid ah.”
Bogáts wuxuu raaciyay: "Ku biirista howlaheena caanka ah Dublin, adeegani wuxuu aad muhiim ugu noqon doonaa kor u qaadida isku xirnaanta guud ahaan Ireland."